Voatazona any Dubai sy fitazonana zaza tsy ampy taona | Law Firms Dubai
Voatazona ao Dubai sy ny fitazonana an-jaza
Tratra tao amin'ny Report UAE
Dubai no iray amin'ireo tanàna be mpandeha indrindra eto an-tany. Ao amin'ny lisitr'ireo mpandehandeha sy mpihaza asa voalohany izy io noho ny harem-pirenena sy noho ny endrika kanto sy kanto. Ny tanàna dia maneho hatsarana sy fahafinaretana avy any ivelany, na dia ho an'ireo izay mbola tsy nankany amin'ny tanàna tsara tarehy aza. Izy io dia mora entina maneho ny fahafaha-manao tsy manam-petra amin'ny maritrano sy ny fanamboarana. Hatsarana jerena!
Mifandraisa aminay ary afaka manampy anao izahay
Dubai: Tanànan'ny ankamaroan'ny dia
Na izany aza, miaraka amin'ireo hatsarana rehetra izay atolotry ny tanàna Dubai na UAE, dia nahazo laza mitovy hatrany izany ho an'ny fanagadrana mpitsidika na dia tamin'ny fanitsakitsahana indrindra aza.
Nandritra ny taona maro izay, ny mpizahatany vahiny izay mihalehibe amin'ny ankapobeny tsy mahalala ny fepetra hentitra, tsy misy fandeferana ao amin'ny Emirates Arabo Mitambatra, miafara am-ponja rehefa mahita fa mila lalàna na fitsipika. Na dia tsy misy antoka aza hoe mety tsy iharan'izany ianao sy ny olon-tianao, dia miaraka amin'ny tombotsoanao ihany ny fepetra raisina. Tsy ho fantatrao mihitsy ny fotoana hahatongavany.
Drafitra ho an'ny fitazonana fifindra-monina
Tsy voatery mikasa ny hiditra an-tsokosoko any UAE ianao satria manana zorony ao amin'ny efi-tranonao manodidina izay mety hampiahiahy ny mpiasan'ny fifindra-monina. Antsoy fotsiny hoe politikam-piantohana fifindra-monina. Toy ny fiantohana fiaran-dalanao, ny fiantohana trano, ary ny ambiny, ny drafitra ho an'ny fihazonana fifindra-monina azo antoka dia fiantohana.
Noho izany, ahoana ny fomba handehananao ny “fiantohana fifindra-monina?”
Manana fifandraisana maika
Na dia tany Dubai na Abu Dhabi aza dia misy tsy mety na inona na inona, izay tsy voatery ho fahadisoanao. Manaova lisitra fifandraisana fifandraisana vonjy maika dia avelao ny olon-kafa hanana kopy. Ny lisitry ny fifandraisana anao dia tsy maintsy ahitana ny mpisolovava anao. Tokony ho eo koa ny fianakavianao sy ny namanao akaiky, ary mety ho ny dokotera anao.
Misy ny mety ho tratry ny telefaona esorina aminao rehefa avy voasambotra ianao. Raha toa ka voatahiry ao amin'ny SIM-nao sy ny telefaoninao ny serasera, dia azonao atao ny mandanjalanja azy ireo haingana rehefa tonga ny fotoana.
Tandremo ny duplicates amin'ny tahirin-kevitrao
Alao antoka fa manana kopia ny antontan-taratasinao rehetra ianao. Tena ilaina ho an'ny mpisolovava anao izany amin'ny fikatsahana ny fahalalahanao ary hanaporofo fa tsy meloka araka ny tokony ho ampangaina. Ankoatra ny olan'ny fitazonana, dia tsy ho hitanao mihitsy hoe inona no notehirizin'i Mother Nature ho anao any UAE.
Omeo ny Key Key Spareo amin'ny sakaiza
Ny sasany amin'ireo zavatra ilaina ilainao raha sendra misy vonjy maika mety ao an-tranonao. Ny famelana namana iray azo itokisana no manana ny lakilemanao faingana dia fanapahan-kevitra tsara indrindra tsy maintsy hataonao.
Tatitry ny dokotera
Raha sendra fanafody karazana ianao, dia aleo tsara ny manao tatitra momba ny dokotera alohan'ny handehanany any Dubai. Dubai dia manana zavatra maro voarara; Ny fanafody nataon'ny dokotera anao dia mety ho fiainanao.
Aleo foana manalavitra olana fa tsy handamina azy ireo any aoriana any
Azo antoka fa tsy ho any UAE ianao, manantena ny hihazonana azy. Raha mbola mifikitra amin'ny lalànan'ny firenena ianao, dia toa ny vorona toy ny vorona. Ny fisorohana ny fanenjehana mety sy fanagadrana dia tafiditra ao amin'ny boky tsara miaraka amin'ny mpanolo-tsaina anao ara-dalàna.
Voatana ao Dubai ary Nahoana ianao no mila mpisolovava amin'izany
Na dia tsy ny ady ara-dalàna aza dia mila fanampiana avy amin'ny mpisolovava, amin'ny toe-javatra maro izay iadian-kevitra momba ny fifanolanana ara-dalàna, toy ny hoe rehefa voatazona ao amin'ny seranam-piaramanidina UAE ianao, dia mety hampidi-doza izany raha mandeha irery ianao. Ny mpisolovava dia mandany ny ankamaroan'ny fotoanany handinihana ireo lalàna. Izany no antony mahatonga azy ireo olona voalohany azonao atokisana raha mila fanampiana ara-dalàna ianao.
Ireto ambany ireto ny antony ambony indrindra tokony hanananao mpisolovava samirery raha ianao voatana any Dubai na gadra Juvenile:
Ny mpisolovava iray dia manana ny fahaiza-manao, ny traikefa ary ny fahalalana ilaina hiadiana ho anao sy ny zonao. Azon'izy ireo ny fisian'ireo lalàna sy ivelany. Ampy tsara ny fahalalana hanampiana anao amin'ny fifampiraharahana. Noho izany, manana mpisolo toerana anao ny mpisolovava mba tsy hahazoanao raha tsy izany. Mariho fa misy tranga maromaro izay ahafahanao mitaky haba. Midika izany fa ankoatry ny fahazoana fitsaràna ara-drariny, misy ihany koa ny fahafahana tsy tokony handoa sanda iray.
Apidaho ny taratasy vita amin'ny mety
Raha ny maha ara-dalàna no zava-dehibe dia hametrahana ny antontan-taratasin'ny fitsarana mahitsy. Mety handratra ny zava-misy aminao ny fandefasana hafatra amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo antontan-taratasy ireo. Koa satria nandinika be momba ny lalàna ny mpisolovava dia mahafantatra ireo antontan-taratasy mety sy ny fomba tokony harahina mandritra ny fametrahana azy ireo. Midika izany fa ny mpisolovava dia eo amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny fitarihana anao amin'ny antontan-taratasy tokony hiomanana, ny fomba, ary rahoviana hametraka azy ireo mba hahazoana antoka fa tsy diso ny fe-potoana manan-danja. Ny tsy fahazoana ireo fe-potoana ireo dia mety hanaratsy ny fizotrany ara-dalàna, ny trangao amin'ny ankapobeny, na azo ampiasaina aminao mihitsy aza.
Ialao ny fandrika ara-dalàna
Ny olona antonony dia mety tsy hahafantatra ny zony ara-dalàna amin'ny maha olom-pirenena azy ary ny andraikitry ny mpisolovava dia ny manazava aminao ireo zony ireo ary manampy anao hiady ho azy ireo. Fantatrao ihany fa na ny mpisolovava aza dia manakarama mpisolovava hafa ho solontenany ara-dalàna. Noho izany dia ampirisihina foana ianao hanakarama ny serivisin'ny mpisolovava iray, tsy hoe rehefa notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina UAE ianao fa koa rehefa mandinika fifanarahana, manomboka orinasa vaovao, na miatrika zavatra misy vokany ara-dalàna. Ity dia afaka manampy anao hanavotra ny tenanao amin'ny fandrika azo ihodivirana.
Miaraha miasa amin'ny mpisolovava iray mba hifanandrify amin'ny mpisolovava amin'ny mpanohitra anao
Satria ilaina amin'ny fitsarana ny mpisolovava, afaka manantena fa hiara-miasa amin'ny mpisolovava efa manana traikefa koa ny mpifaninana aminao. Mazava ho azy fa tsy te-hanao fanelanelanana amin'ny olona mahalala tsara ny lalàna ianao. Ny ratsy indrindra dia mety hitranga raha miady aminao ny zavatra ary mahita ny tenanao ianao ao amin'ny efitrano fitsarana tsy misy mpisolovava ary tsy manam-pahalalana ara-dalàna. Raha mitranga izany, manana vintana kely ianao amin'ny fandresena ny ady ara-dalàna.
Mifantoha amin'ny fanatsarana sy fanasitranana
Amin'ny tranga iray raha misy ny ratra tafiditra amin'ny fifandirana na ny fanavakavahana, ny fiaraha-miasa amin'ny mpisolovava iray dia mamela anao hifantoka amin'ny fizotran'ny fanarenana. Tsy maninona na ara-bola, ara-pihetseham-po na ara-batana ny fanaintainana, mifantoka amin'ny fifantohana sy herinao amin'ny fanarenana sy famerenana amin'ny laoniny ny fiainanao.
Ireo no antony maro mahatonga ny manakarà mpisolovava iray mitsikera rehefa voasambotra any Dubai ianao na tafiditra amin'ny adihevitra ara-dalàna.
Arovy ny tenanao, ny fianakavianao, ny sakaiza, ny klazy
Mora ho an'ny mpanjifa iraisam-pirenena